I-migraine: izimbangela, ukwelashwa, izinhlobo nezimpawu
Sifaka imikhiqizo esicabanga ukuthi izosiza abafundi bethu. Uma uthenga ngezixhumanisi ezikuleli khasi, singathola ikhomishini encane. Nansi inqubo yethu: I-Migraine yisimo sezempilo esifaka phakathi ikhanda elibuhlungu, eliphindaphindayo nezinye izimpawu. Ngaphambi kwekhanda, kungahle kube nezinguq...
Yini ebangela izingono ezizwelayo? izimbangela kanye nokwelashwa
Kunezimbangela eziningi ezingaba khona zezingono zamathenda, eziningi zazo ezinobungozi. Kodwa-ke, ezimweni ezingavamile, lolu phawu lungahle lube ngenxa yesimo esibi esidinga ukwelashwa. ubuhlungu besifuba Kule ndatshana sixoxa ngezimbangela ezithile zezingono...
Ukusha kwepenile: izimbangela eziyi-7 nokwelashwa
Umuzwa oshisayo endondeni ungaba nezimbangela eziningi, kepha iningi liyelapheka. Ukuzwa okushisayo kwenzeka ngesikhathi sokuchama futhi kungenzeka, ngokuya ngesizathu, kwenzeke kanye nezinye izimpawu. Isibonelo, kungahle kube nokuvuvukala noma ukulunywa okuzungeze ipipi. Izinhlobo ezahlukahlukene z...
Uyini umehluko phakathi kwezifo ezibangelwa amagciwane kanye ne-virus?
Amagciwane namagciwane izinhlobo ezahlukene zama-microorganism. Akuzona zonke ezibangela izifo, kepha ama-bacterial and virus pathogens anamandla okwenza lokho. Le ndatshana ichaza umehluko phakathi kwezifo ezibangelwa amagciwane kanye ne-virus futhi inikeza izibonelo zalowo nalowo. Sichaza nezindle...
Ababelethisi 'abafunwayo' bangabuyela eStafford County Hospital
Uphiko lokubelethisa eStafford County Hospital lwavalwa ngonyaka odlule ngenxa yalolu bhubhane...